AHOANA NY FAMERENANA AMIN'NY LAONINY NY FIKIRAKIRANA TAMBAJOTRA (TO SETUP DEFAULT) AO AMIN'NY FANAVAOZANA WINDOWS 10 20H2 - WINDOWS 10
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fikirakirana tambajotra (To setup default) Ao amin'ny fanavaozana Windows 10 20H2
Voamarikao ve rehefa avy nametraka Oktobra 2020 vaovao farany 20H2 , Windows 10 PC tsy afaka mifandray amin'ny Internet? Tsy mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ve ny PC-nao? Sa sendra olana amin'ny tamba-jotra sy fifandraisana amin'ny Internet ao amin'ny PC ianao aorian'ny fametrahana ny fanavaozana ny endri-javatra Windows 10 20H2 nefa tsy afaka manamboatra azy ireo? Amin'ny ankapobeny, izahay dia mamporisika ny hampandeha ny troubleshooter adapter tambajotra izay manamboatra ny olana mifandraika amin'ny fifandraisana sy ny fifandraisana amin'ny Internet. Fa raha tsy afaka mamaha olan'ny tambajotra iray na maromaro amin'ny fampiasana troubleshooter ianao na tsy afaka mamantatra ny olanao aorian'ny fametrahana vahaolana isan-karazany Izay tokony handinihanao mamerina ny fikirakirana tambajotra fanamboarana default izay manamboatra ny olana amin'ny ankapobeny.
Hevitra ato Anatiny FAMPISEHOANA 1 Inona ny Windows 10 Network Reset? rOA Avereno ny fametrahana ny tambajotra ao amin'ny Windows 10
Inona ny Windows 10 Network Reset?
Ny Network Reset dia singa vaovao ao amin'ny Windows 10 izay ahafahanao mamerina ny tambajotrao ary manamboatra ny olana amin'ny fifandraisana amin'ny tsindry bokotra iray. Fampiharana safidy Windows Reset Network 10
kisary tambajotra tsy hita tao anaty lozisialy
Ny fikirana TCP / IP dia haverina ho default.
Ho hadino daholo ireo tambajotra voatahiry.
Ireo zotra maharitra dia voafafa.
Ary avereno ireo adaptatera Network & apetraho ireo singa tambajotra amin'ny toerana misy anao hanamboarana ireo olana eo amin'ny fifandraisana.
Fanamarihana: Windows 10 dia hanadino ireo tambajotra Wi-Fi rehetra sy ny teny miafiny. Noho izany, raha tsy tadidinao ny teny miafin'ny Wi-Fi izay ampifandraisin'ny PC anao, dia tokony ho fantatrao na alefanao ny tenimiafin'ny Wi-Fi voatahiry alohan'ny hamerenanao ny fikirana tambajotra.
Avereno ny fametrahana ny tambajotra ao amin'ny Windows 10
Mba hanatanterahana famerenana tambajotra na famerenana ny fikirakirana tambajotra amin'ny fametrahana azy default amin'ny windows 10 dia araho ny dingana eto ambany.
Sokafy ny Fikirana fampiharana ( Windows Key + I ) ary tsindrio Tambajotra sy Internet> Status .
Mikorisa midina hatrany amin'ny faran'ny pejy, dia hahita rohy mitondra ny lohateny ianao Network Reset Tsindrio ity.
ny Fikirana hanokatra varavarankely vaovao antsoina hoe Network reset ny app “Ity dia hanala avy eo hamerina hametraka ireo adapter tambajotram-pifandraisanao rehetra, ary hametraka ireo tambajotra tambajotra hafa hiverina amin'ny toe-javatra niainany. Mety mila mametaka rindrambaiko tambajotra hafa ianao aorian'izany, toy ny rindrambaiko mpanjifa VPN na switch virtual. ”
irql tsy latsaky ny mitovy
Raha tsy maninona ianao amin'izany rehetra izany ary maniry ny handrosoana amin'ny famerenanao ireo adaptatera tambajotrao, kitiho na kitiho ny Avereno indray izao bokotra . Ho hitanao avy eo ny fampitandremana fa ny fanatanterahana an'ity famerenana ity dia hanala sy hametraka ireo adapter tambajotram-pifandraisanao rehetra ary hamerina ny zava-drehetra hiverina amin'ny fivadihan'ny orinasa. Tsindrio eny raha hanomboka ny famerenana tanteraka.
Aorian'izany, hisokatra avy hatrany ny kaomandy izay hanova ny toe-bolanao. Rehefa avy niandry fotoana fohy dia hiteny aminao ny varavarankely fa hanidy ny solo-sainanao ao anatin'ny 5 minitra hahafahany avereno ary manaova fanovana amin'ny rindrambaiko rafitra.
Miandrasa azafady mandra-pamerin'i Windows ny solosaina. Any ianao no mandeha daholo ny fikirakiran'ny tamba-jotra dia napetraka ho default toy ny teo am-panaovana windows voalohany.
Izay ihany, Ny fomba tambajotra reset dia hamerina amin'ny laoniny ny fikirakira tambajotra Windows default ary tokony hanamboatra ny olan'ny fifandraisana amin'ny tambajotra izany. Moa ve ny fanatanterahana ny 'Reset Network Settings' nanampy tamin'ny fanitsiana ny olan'ny tambajotra Windows 10 sy ny fifandraisana amin'ny Internet? ampahafantaro anay amin'ny hevitra etsy ambany koa vakio
Vahaolana 5 hanamboarana ny fampiharana Netflix tsy mandeha amin'ny windows 10
Voavaha: ny mpizara proxy voalamina dia tsy mamaly ny windows 10
Fifandraisana birao lavitra tsy miasa windows 10 1903
Voavaha: Tsy afaka namita ny lesoka tamin'ny endrika endrika i Windows
tsy mandeha ny menio fanombohako
Windows 10 misintona mikatona amin'ny 99
Ny "local area connection" dia tsy manana fikirakira ip mety